China pabrik vy baoritra tranobe sy ny mpamatsy | Shenghang
Ny tranobe vy vita amin'ny trano vy dia azo ampiasaina ho trano fonenana, trano faranana, trano fandraisam-bahiny, vohitra fialan-tsasatra, tranom-barotra, sns.
Nitombo ny fangatahana hampihenana ny fanjifana angovo amin'ny tranobe sy ny fampiasana fitaovana vita fanodinana. Ny ahiahy ireo dia manana finiavana hamorona tontolo maharitra kokoa. Tany Eropa ny tranobe no tompon'antoka amin'ny 40% amin'ny fanjifana angovo, hanana fantsom-pifandraisana (rafi-panafahana sy ny hatsiaka) anjara lehibe, izay miankina amin'ny toetrandro ihany koa (Santos et al. 2012). Noho ny fanjifana angovo lehibe amin'ny tranobe, ny Vondrona eoropeana dia nametraka tanjona marobe ao amin'ny Directive Building Directive (Direction European 2010/31 / EU) momba ny "saika angovo mivoatra" ho an'ny taona 2020. ka voafaritra fa tsy ihany no tokony hatao ampitomboina ny fandraisana anjara avy amin'ireo loharanom-angovo azo havaozina, fa tsy maintsy atao ihany koa ny fanatsarana ny fahombiazan'ny trano.
Namboarina vy vy galvanized mihetsika toy ny firafitry ny fanondranana entana lehibe, ny menaka mandavantaona, ny akora voajanahary, ny rano, ny fitaovana famonoana afo ary ny tranobe vita amin'ny hazavana maivana.
Ny singa rehetra ao an-trano dia voaomana mialoha ao amin'ny orinasa, ny mpiasa dia afaka mamita ilay fananganana amin'ny fanangonana tsotra sy ny haingo, ny fanatanterahana ny fanodinana fanamboarana. Teknolojia matotra sy mandroso ary ho amin'ny hoavy.
Raha jerena ny fiantraikan'ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana, io teknika fananganana io dia mamela ny fampiharana ny politikam-pananana izay ahafahana mitohy maharitra ny harena voajanahary, mampifanaraka ny fifandraisana eo amin'ny tontolo voajanahary sy ny fananganana olona.
1. Fialam-boly sy fitahirizana angovo.
2.Fanamboarana haingana, mitahiry ny vidin'ny asa betsaka. Ary ny tapaky ny fananganana nanapaka ny antsasaky.
3.Mandrehitra tena ary mitahiry fitaovana. Mampihena ny fako amin'ny fananganana 80%.
4. Porofo azo antoka sy maharitra, horohoron-tany, porofon'ny rivo-doza.
5. Mahazo aina tsara.
6. Safidy isankarazany, ambany vidiny.
Previous: Vidiny mora indrindra indrindra Apvc Roof Sheet - MGO Glazed Roofing Sheofing - Shenghang
Manaraka: MGO Glazed Sheofing Roofing Sheets
Trano matanjaka avo
Sampam-by vy vita amin'ny vy, Taratasy vita amin'ny famononam-bary any Galvalume, Sheet vy voakorontana, Sheet plastika vita amin'ny plastika, Mpitety tafo fanala, Tady fandrefesana,